Kpọtụrụ - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na nchịkwa saịtị, detara anyị akwụkwọ ozi site na iji fọm dị n'okpuru:
Ndị njem ole nọ na Jakarta?
Japan 2013 18,968 2014 20,423 2015 18,899 2016* 9,777 ole mbịarambịa nọ na
Enwere m ike itinye akwụkwọ na Philippines na New Zealand?
Ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala Philippines na ị bụ nọọsụ aha, onye njikwa ugbo
US ọ nwere oke ikuku na Vietnam?
N'agbanyeghị ịdị elu ikuku na ọkara na elu elu n'oge Vietnam
Philippines oghe maka ndị njem nlegharị anya ugbu a?
Philippines emegheghị maka njem nlegharị anya mana ọ belatara mmachi ntinye. A gbara ọgwụ mgbochi zuru oke
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị Malaysia ji buru oke ibu?
Ọnụnọ nke oke ibu n'etiti ndị ntorobịa Malaysia na-abụkarị n'ihi ibi ndụ na adịghị mma
Kedu obodo ndị tọrọ ntọala Asean?
Òtù Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ma ọ bụ ASEAN, hiwere na 8 Ọgọst 1967
Kedu onye nwere Ikea Singapore?
Gịnị mere e ji kee Little Saigon?
Ndị Filipinz ole bi na mba ofesi?
Cambodia ọ nwere klas etiti?
Kedu obodo dị na Malaysia?
Ajụjụ: Malaysia ọ nwere ugwu mgbawa?
Azịza ọsọ ọsọ: ụbọchị ole ka ngwugwu si Japan gaa Philippines?